Sidee si ay ula qabsadaan / hagaagsan vlcsubtitle dib u dhac?
1 ciyaaro la VLC
1.2 Play Content DLNA
1.3 Play Videos in VLC la Airplay
1.4 Play YouTube Videos in VLC
1.5 Play M2TS la VLC
1.6 Play MTS la VLC
1.7 Play M4V la VLC
1.8 Play MP4 in VLC
1.9 Play RTMP la VLC
1.10 Play ISO la VLC
1.11 Play AVI la VLC
1.12 Play wmv la VLC
1.13 Play MIDI la VLC
1.14 Play 3D Movies la VLC
AVCHD 1.15 Play la VLC
1.16 Play Sopcast in VLC
1.17 FLAC aan ciyaari doonin
1.18 MP4 aan ciyaari doonin
1.19 FLV aan ciyaari doonin
1.20 MKV aan ciyaari doonin
1,21 MOV aan ciyaari doonin
1.22 UNDF aan ciyaari doonin
1.23 Isticmaal VLC u PS3
2 Beddelaan & Stream
2.2 Stream From VLC in TV
2.5 VLC in MP4
3 ayeey la VLC
3.1 Edit vidoe Isticmaalka VLC
3.2 beddesha Video Isticmaalka VLC
3.3 Goo Video Isticmaalka VLC
3.4 Racing videos galay VLC
3.5 U dheellitir & nidaameed VLC Cinwaan
4 VLC u Mobile
4.1 VLC ee macruufka
4.2 VLC u iPad
4.3 VLC u iPhone
4.4 VLC u Android
5 VLC Kaaliyaha
5.1 VLC Kaaliyaha
6 Talo & Tricks
6.1 Download VLC 64 yara
6.5 VLC haragoodu
6.7 VLC sida Default Player
6.8 Rip CD la VLC
6.9 Guba VLC Faylal ay si DVD
6,11 Remote Control VLC
6,13 VLC tuuryo
Ciidamada 6,14 Screen la VLC
6,15 nidaameed VLC Audio
6.20 Snapshots in VLC
6,21 Change XBMC in VLC
6,22 Ma VLC Safe
Sidee si ay ula qabsadaan / hagaagsan Cinwaan vlc dib u dhac?
Subtitles waa jidka loo caawimo weyn, haddii aanu u baahan yihiin qaar ka mid ah caawimaad dhab ah. Si kastaba ha ahaatee, in ka sii badan yahay caawimo, isla markaasna waxay u abuuri karaan cuncun ay dhacdo in dib u dhac. Haddii subtitles kuwanu waa kuwa ka mid ah u hagaagsan la videos, ay ka jeedin karaan in ay ilaa xad ka weyn oo abuuri kartaa wareer iyo kharribaad dhadhan dhamaystiran oo video ah. Laakiin nasiib wanaag, waxaa jira qaar ka mid ah siyaabaha aad ku qabsato / hagaagsan VLC Cinwaan Dib sidoo kale waxa ay noqon Windows ama Mac.
Qeybta 1: Waanwaanta subtitles u dhigto on Windows
Qeybta 2: Waanwaanta subtitles u dhigto on Mac
Qeybta 1: Waanwaanta subtitles dib u dhac ku Windows
Marka aad la kulantid dhibaato this on Windows, waxaad u baahan tahay in la furo vlc, riix Tools, markaas Track .Wadashaqayntaas. Waxaad ka heli doontaa Cinwaan qaybta s / Video.
Xaaladdan oo kale, Cinwaan waxaa ka danbayso video, aad u baahan tahay si ay u bixiyaan qiimaha xun si 'Advance ee subtitles badan video' qaybta. Qaado tusaale, in subtitles waa Video dib u dhaca ah ee ilaa 5 ilbiriqsi qiyaastii ka dambeeya, waxaad u baahan tahay in la sameeyo xun ama dag 5,000 s. Xawaaraha ee subtitles waxaa caadi ahaan laga beddelo si video ah. Just guji calaamad helid iyo aad samaysay waa la. Xaaladdan oo kale, subtitles aad ka hor video yihiin, waxaad u baahan tahay in ay galaan qiimaha wanaagsan ee lacagta in si gaar ah waqti, taasoo la odhan karaa waa sida dib u dibna sii habka qabowjis. Waxaad hubin si ay u arkaan isbedelka dareemi la subtitles aad.
Waxaad arki kartaa oo dhan si dhekhso s for isku mid, oo ku saabsan sida loo sameeyo si fudud aad u badan.
Waxaa lagu talinayaa in Product
Siidaysay Your Music - Transer, Download, Record, Manager, Guba Music Tool
Bedelka music u dhexeeya qalabka wax.
Isticmaal Lugood leh Android.
Download music ka goobood music kale YouTube /.
Downlaod music ka dhisay-in playlists sare.
Qor wax kasta oo song ama playlist aad ka heshaan internetka.
Tags music, daboolida dayactir iyo tirtirto tus.
Maamul music iyada oo aan xayiraado Lugood.
Dhammaataan gurmad / celin maktabadda Lugood.
Samee aad mixtape CD caado shakhsi si fudud!
Ciyaaryahanka music Professional / music qaybsiga qalab.
Qeybta 2: Waanwaanta subtitles dib u dhac ku Mac
Iyada oo ay dhacdo Mac, xal kale oo waa. Tag goobaha Cinwaan oo aad ka heli doonaa fursad u dhac kaliya dhexe ee. Waxaad ku qabsato karaa sida iyo aad u hesho natiijooyinka la doonayo.
Xitaa Waxaad isku dayi kartaa la toobiye 'amarka H' haddii ay dhacdo, waxaad u baahan tahay in la kordhiyo dib u dhac Cinwaan ama isticmaal 'Command G' inuu hoos u dhac Cinwaan. Iyada oo labada tuuryo ah, aad doonaysid in aad dalka ku yaalla bogga rabay iyo si fudud u qabsato karaa subtitles ah. Xaaladdan oo kale, subtitles aad ka hor video yihiin, waxaad u baahan tahay in ay dib u dhigaan waqtiga saxda; halka, haddii aad haysato subtitles ka dambeeya video geeyo , kaliya waxa ay u guuraan dhakhso by xaddiga waqtiga, aad dareensan tahay. In labada mararka, aad doonaysid in aad leedahay subtitles ku waafajiyo ugu fiican, si aadan u malayn dhib daawanayay aad video.
Subtitles waa hab arrin wax ku ool ah in si fiican loo fahmo videos ah. Qabsiga ka mid ah subtitles kor ku xusan labada dhufto ee waa uun ku meel gaar ah oo ay u hagaagsan lagu sameeyey, in la tageen doonaa marka xigta, aad furto video isku mid ah. Xaaladdan oo kale, aad raadinayso xal joogto ah, markaas xalka kaliya ee haray waa in la helo subtitles dhammaataan synced. Si kastaba ha ahaatee, markii qabka ah, waxaad ku raaxeysan kartaa video ee ugu xal ku meel gaar ah syncing ee subtitles.
Ma VLC Safe?
The Waxaad-waa-leeyihiin kaaliyaha VLC, Wondershare Video Converter Ultimate
Sida loo beddel VLC Maqaarka
KMplayer vs VLC Media Player, taas oo ah mid ka fiican
15-tuuryo VLC aad qabto in aad ogaato!
VLC plugins web u daalacashada sare
Stream videos la VLC Media Player ama VLC Streamer
Sida loo Play M4V Faylal ay la VLC Media Player?
Shan Qaybaha waaweyn ee VLC
VLC Player No Sound Solution
> Resource > VLC > Sidee si ay ula qabsadaan / hagaagsan Cinwaan vlc dib u dhac?